Olona an’Arivony Nidina an-Dalamben’i Roma Hanome Ako ny Antson’ny Papa Fransoà Hanaovana Hetsika amin’ny Toetr’Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2015 6:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, English
Diabem-pankalazana ny ansiklika ataon'ny finoana maro, Roma Jona 2015. Tompon'ny sary: Hoda Baraka/350.org
Ity lahatsoratra ity dia nifototra amin'ny sombin-tantara nosoratan'i Hoda Baraka hoan'ny 350.org, fikambanana manorina ny hetsika manerantany momba ny toetr'andro, ary avoakan'ny Global Voices [misy amin'ny teny malagasy ihany koa] ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Iray amin'ny mpanomana ny diabe ny 350.org.
Niara-nanao diabe tao Roma ny olom-pinoana, fikambanana sivily ary vondrom-piarahamonina iharan'ny fikorontanan'ny toetr'andro tamin'ny alahady ho fanehoam-pankasitrahana ny Papa tamin'ny famoahany ny Ansiklika momba ny tontolo iainana, “Laudato Si’“, ary miantso ny hanaovan'ny mpitondra eto amin'izao tontolo izao hetsika matevina kokoa momba ny toetr'andro.
Tompon'ny sary: Hoda Baraka/350.org
Eo ambanin'ny fanevan'ny “Tany Iray, Fianakavian'Olombelona Iray,” ny diabe dia niarahan'ny katolika sy ny kristiana hafa, mpanaraka ny finoana tsy kristiana, mpandala ny tontolo iainana ary ny olona tsara sitrapo. Nifarana teo amin'ny kianjaben'ny Masindahy Piera tamin'ny fotoana anaovan'ny Papa ny Anjelisy ny Diabe.
Tontosaina isaky ny alahady ny Anjelisy rehefa ao Roma ny Papa. Amin'ny mitataovovonana dia miseho eo amin'ny varavarankelin'ny trano itoerany izy ary eo no anomezany teny fohy arahin'ny Angelisy ary mifarana amin'ny Tso-drano Apostolika.
Ny diabem-pankalazana dia nentanin'ny tarika mpitendry mozika iray, antoko mpihira ara-toetrandro iray ary sangan'asan'ny sarambabem-bahoaka maroloko novolavolain'ny artista avy ao Italia sy ny firenenkafa, izay nanana anjara toerana lehibe tamin'ny Diaben'ny Toetr'androm-Bahoaka tao New York tamin'ny Septambra lasa teo. Ao anatin'ny sangan'asa ny endrika ravina maitso mirefy 75 metatra, ahitana ny Soratra [Masina] iresahana an'Andriamanitra miahy ny voary sy ny mahantra.
Ao anatin'ny mpanomana ny diabe ny : 350.org, FOCSIV, fiarahan-dian'ny [fikambanana] fampandrosoana katolika italiana mihoatra ny 60, vondrona mpamonjy voina sy rariny ara-tsosialy, ary OurVoices, fanentanana iraisampirenena, ahitana finoana maro tarihin'ny GreenFaith sy ny Conservation Foundation.
Nanatevin-daharana hisolotena ireo fikambanana lohalaharana sy hampita ny hafatra hitakiana ny rariny ara-toetr'andro ry Arianne sy George avy ao amin'ny Pacific Climate Warriors [mpiadin'ny toetr'andro ao Pasifika] miara-dalana amin-dry Mompera Warren sy Mompera Jovino, izay pretra avy any Filipina nirotsaka an-kianja amin'ny fanentanana momba ny toetr'andro.
Feo avy aty Atsimo mampita ny fahamehana hisian'ny rariny ara-toetrandro. Tompon'ny sary: Hoda Baraka/350.org
Ao amin'ny tenin'i Arianne: “Raha mijoro amin'ity fotoana saropady eo amin'ny famahana ny olan'ny toetrandro ity izahay dia mankasitraka manokana ny papa tamin'ny famoahany ny Ansiklika ho fanairana izao tontolo izao hahatsapany ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ireo olona any amin'ny faritra rehetra. Ny marina amin'ity raharaha ity dia mila miray hina amin'ny famahana ny olan'ny vanim-potoana iainantsika ny zanak'olombelona. Olana ho an'izay rehetra manana fahatsapana ara-maoraly ny fikorontanan'ny toetr'andro.”
Niangaviana hametraka ny fialana amin'ny fampiasambola ho ao anatin'ny hafatra ara-maoraly ho famahana haingana ny olana ateraky ny fikorontanan'ny toetr'andro ny Papa Fransoà. Tompon'ny sary : Hoda Baraka/350.org
Ao anatin'ny hafatra nampitaina tany amin'ny Papa nandritra ny diabe ho ao anatin'ny hafany ara-maoraly noho ny fahamehan'ny famahana ny olan'ny krizin'ny toetrandro ny fangatahana hiala tsy hampiasa vola amin'ny angovo milevina ambanin'ny tany .
“Ny fanentanana hiala amin'ny fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana ny solika milevina dia voalahatra miaraka amin'ny tsirim-pitondratena ara-maoraly nampitain'ny Papa Fransoà ao amin'ny Ansiklikany” hoy ny mompera Edwin Gariguez, seketera mpanatanteraky ny Caritas Philippines. “Ny fanentanana dia natao hampisongadinana ny tsy fetezan'ny fampiasam-bola amin'izay mety ho loharanon'ny tsy rariny iainantsika amin'izao fotoana izao. Izany no antony hanantenanay fa ny firosoana sy ny fananganana ity hafatra mahery vaika ity, dia azon'ny papa apetraka miaraka amin'ny fandresen-dahatra ara-maoraly hanaovana hetsika maika dia maika noho ny [fikorontanan'ny] toetrandro ny fialana hampiasa vola amin'ireo angovo milevina.”
Diabe miditra ny kianjan'ny Masindahy Piera nandritra ny anjelisy isan-kerinandro fanaon'ny Papa. Tompon'ny sary: Hoda Baraka/350.org
Nisy ny fanangonan-tsonia mandrisika ny Papa Fransoà hanala an'i Vatikana amin'ny fampiasam-bola amin'ny angovo milevina ambanin'ny tany ary efa nahangona olona an'aliny sahady. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, ampolony ny fikambanam-pivavahana nanala ny renivolany amin'ny fitrandrahana arintany, solika ary etona fandrehitra na ao anatin'ny fanohanana ny ezaka, ka tafiditra amin'izany ny Filankevitry ny Fiangonana Manerantany manana krisitiana 500 tapitrisa amin'ny firenena 150.
Nanambara ny Fiangonan'i Angletera (Anglikana) tamin'ny mey 2015, fa nivarotra arintany sy vaingan-tsolika 12 tapitrisa £ ary vao tamin'ity herinandro ity ny Federasiona Loterana Manerantany no nanambara fa tsy hampiditra ny fampiasam-bolany amin'ny orinasan-tsolika milevina ary miantso ny fiangonana mpikambana manana mpiangona 72 tapitrisa ao aminy hanao tahaka izany ihany koa.
Raha atotaly dia mihoatra ny 220 ny fikambanana lehibe nanolo-tena hiaIa amin'ny fitrandrahana solika milevina ambanin'ny tany, ka ny fikambanam-pinoana no mandrafitra ny ampahany lehibe indrindra amin'izany.
Raha miomana ho amin'ny fifampiresahan'ny Firenena Mikambana momba ny toetrandro hotontosaina ao Paris amin'ity taona ity ireo mpitondra lehibe eto an-tany, mbola hamelona ny moteran'ny revolisiona ara-etika sy ara-toekarena ilaina isorohana ny fikorontanan'ny toetr'andro mahatsiravina sy ny fitomboan'ny hantsana (ara-toekarena) ny fitomboan'ny hetsika fialana amin'ny fitrandrahana, lakile iray amin'ny ansiklikan'ny Papa Fransoà.
Ny lalana mazava ilaina hamahana ny olan'ny toetr'andro no iray manafaka ny zanak'olombelona amin'ny vahohon'ny solika ambanin'ny tany eto amin'ny planeta. Amafisin'ny ansiklika ny fikisahana tektonika misy amin'izao fotoana izao: tsy afa-manohy ny fanaovana ny Tany ho fitaovam-pitrandrahana (intsony) isika.